चीनसँगको यात्रा ब,न्द नगरेर सरकाले ग,म्भीर ग,ल्ती गर्‍यो भन्नू हुन्छ – डा. दिक्षित
काठमाडौं, ५ चैत्र । चि,कित्सक समेत रहेका नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले युरोपलगायत ५४ मुलुकको यात्रा ब,न्देज लगाउने सरकारको नि,र्णयको स्वागत गर्दै चीनसँगको यात्रा समेत तत्काल ब,न्द गर्न मा,ग गरेका छन् । चीनमा कोरोना भाइरसको सं,क्रमण बढी भएको तथ्यांक आइसक्दा पनि सरकारले यात्रा ब,न्द नगरेर ग,म्भीर ग,ल्ती गरेको बताए ।
‘भ्रमण वर्षका नाममा डलर आउँछ भनेर चीनसँगको यात्रा बन्द नगरेको ?’ डा. दिक्षितले रिपोर्टर्स नेपालसँग प्रश्न गरे । सरकारले अहिले यात्रा बन्देजका लागि लिएको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले चीनसँगको यात्रा बन्द गर्न कुनै ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
सरकार २०२० को भ्रमण वर्षमा चिनियाँ पर्यटक ल्याउन केन्द्रित हुँदा यात्रा ब,न्द नगरेको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘सर्पको मुखमा भ्यागुता परेजस्तो भयो । चीनसँगको यात्रा ब,न्देज नगर्दा आफू अ,चम्मित भएको बताए ।’
देशभित्र कोरोना भाइरसको सं,क्रमण हुन नदिन चाल्नुपर्ने यात्रा ब,न्देजको क,दममा ढि,लाई भएको बताए । उनले भने, ‘ज्युँदो नेपालीले कमाउँछ मरेकोले सक्दैन भन्ने बुझ्न किन ढिलो गरेको ?’ जनताको स्वास्थ्यमा खे,लवाड गर्न नहुने भन्दै सं,क्रमित देशसँगको यात्रालाई ब,न्देज गर्नैपर्नेमा कुनै तर्क राख्न नहुने बताए ।
सरकारले आजै युरोप, पश्चिम एशिया, खाडी मुलुकसहितका देशहरुमा यात्रा ब,न्देज लगाएपनि चीनसँगको यात्रा ब,न्द नगगर्दा डा. दिक्षितको पछिल्लो भनाई आएको हो ।